SOUNDBAR TIYAATAR GURIGA
Sidee Xiriiriyayaashu Ugu Shaqeeyaan Baar Maqal?
Markaad dooranayso baarka dhawaaqa, hubi inaad mid ka mid ah ku xiraysid isku xirnaanta saxda ah ee TV-gaaga iyo qaybaha kale. Waxaa jira laba siyaabood oo aasaasi ah oo loogu xidhi karo codka codka nidaamkaaga. Habka ugu caamsan ayaa ah inaad u isticmaasho TV-gaaga xarun beddelaad ah: waxaad isku xireysaa qalabkaaga Blu-ray, cable o ...
Baararka Codka Ma u shaqeeyaan Muusikada?
Iyada oo caan ku ah looxanka muusikada bilaa-waayirka ah, layaab ma leh in baarar badan oo dhawaq ahi ay hadda bixiyaan awooddaas. Bluetooth-ku-dhisan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad muusikada si fudud uga sii dayso taleefankaaga casriga ah, kaniiniga, ama kombiyuutarka karti u leh Bluetooth. Waxay la shaqeysaa muusikada ku keydsan taleefankaaga ...
Stereo ama Dhawaqa Sanqadha?
Waxaa habboon in lagu celiyo in bar dhawaaq kastaa uu ka sii cod fiicnaan doono TV-gaaga. Baararka dhawaaqa aasaasiga ahi wuxuu u eg yahay naqshadaha istuudiyaha ah ee soo saara isla macluumaadka maqalka kanaalka midig iyo bidix sida TV-gaaga. Laakiin waxay u dhawaaqayaan wax aad u ballaadhan mahadnaqa kuwa waaweyn ee ku shaqeeya ampl ...
Baarka Dhawaaqa ama Saldhiga Dhawaaqa?
Illaa iyo hadda, waxaan ka hadleynay baararka dhawaaqa oo runtii leh qaab dheer oo dhuuban oo baarka ah. Laakiin waxaa jira nooc kale: bar-dhawaaqa qaab-dhismeedka, oo mararka qaarkood sidoo kale loo yaqaan saldhig dhawaaq ah. Naqshaddan ballaaran ee qaab-hooseeya ah waxay hoos fadhidaa TV-gaaga wayna taageereysaa. Saldhigyada dhawaaqa waxay leeyihiin s ...
Ka warran Subwoofer-ka 'My Sound Bar'?
Haddii aad u maleyneyso inaad u baahan tahay bar dhawaaq leh subwoofer la socda, taasi waxay yareyn kartaa xulashooyinkaaga meelaynta xoogaa, laakiin waxay u badan tahay wax ka yar intaad filayso. Taasi waa sababta oo ah ku dhowaad dhammaan subwoofers -yadu waa wireless. Taasi waa, waxay ka helaan codka maqalka silig la'aan ...
Xagee Qorsheynaysaa Inaad Dhigto Baarkaaga Dhawaaqa?
Ogaanshaha meesha aad dhigeyso baarkaaga dhawaaqa ayaa isla markiiba fududeyn doonta go'aankaaga isla markaana soo koobi doona xulashooyinkaaga. Waxaa jira laba ikhtiyaar oo aasaasi ah. Haddii TV-gaagu uu sudhan yahay darbiga waxaad ku dhejin kartaa baarka dhawaaqa midigta hoostiisa si hagaagsan, oo aan isku xirnayn. Hadaad goin tahay ...
Maxaan Ugu Baahanahay Baar Baar Dheer?
Baararka dhawaaqa ayaa ku qarxay caan ka ahaa sanadihii la soo dhaafay, tirada nuucyada ayaa sidoo kale qarxay. Marka waxaan diyaarinay tusahan wax iibsiga si uu kaaga caawiyo inaad si dhakhso leh u ogaato dhadhanka maqalka maqalka ee sida ugu fiican kuu shaqeyn kara Baarka dhawaaqa ayaa ah mid ku hadla nidaamka hal-ku-dhagga ...
Waa maxay Baarka Dhawaaqa?
Baararka dhawaaqa jiritaankooda TV-yada fidsan ... ugu yaraan ilaa xad. Xaqiiqdii, shaashadahaas maqaarka ah waxay soo saareen sawir cad oo cad. Laakiin kuwooda yar yar, ee ku hadla gudaha xitaa ma soo saari karaan wadahadal si cad, waxbadan ayaa ka yar bixinta qaraxyada qancinta, shilalka baabuurta iyo dhammaan ...
Cinwaanka:Dhismaha 33, Baoshan beerta warshadaha labaad, PingShan Town, shenzhen, Shiinaha
Hadalka Wifi Soundbar, Tv Soundbars, Wifi Soundbar Wixii Tv, Tv Iyo Soundbar Mount, Alexa Soundbar, Karaoke Soundbar,